ရန်ကုန်မြို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြို့တော်စည်ပင်ဥပဒေ ကိုပြင်ဆင်ပြီး စီးပွားရေးဆိုင?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်မြို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြို့တော်စည်ပင်ဥပဒေ ကိုပြင်ဆင်ပြီး စီးပွားရေးဆိုင??
ရန်ကုန် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇-ရန်ကုန် မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ဥပဒေကိုပြုပြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး စည်ပင် သာယာကို စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းမျိုးပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြော သည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖေဖော် ၀ါရီ ၁၇ ရက်က MCC တွင်ပြုလုပ် သည့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် တွေ့ကြုံနေရသော အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းရေးနှင့်လုပ်ငန်းများရေရှည် တိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ကူညီဖြေရှင်းပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် တင်ပြ ခြင်းအခမ်းအနားတွင် ၎င်းင်းကအထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကို စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့်အခြေအနေသည် ဂျပန်၊ စင်ကာပူနှင့်အနောက်နိုင်ငံတို့တွင်ရှိသည့် ဒေသန္တရစည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များ၏ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို နမူနာယူကာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုဆောင် ရွက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
“စည်ပင်သာယာဥပဒေဟာ ရန်ကုန်မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအ တွက် အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ် ခုမှာရှိပါတယ်။ ဒီစည်ပင်သာယာ ဥပဒေနဲ့ အညီပဲ ဒေသန္တရစည်ပင် ရွေးကောက်ပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ် ပါတယ်။ ဒီဥပဒေကိုမူကြမ်းတစ်ခု ပြုစု ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ” ဟု၎င်း က ပြောသည်။
ယင်းစည်ပင်သာယာဥပဒေ ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရန်အတွက် စည်ပင်သာယာဥပဒေကြမ်း ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ် တော်ထံလွှဲအပ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းစည်ပင်သာယာဥပဒေ ကြမ်းတင်ပြထားပြီး ယင်းဥပဒေ ကြမ်းတွင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ရှင်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန်ချောမွေ့သည့်စ နစ်များထည့်သွင်းထားကြောင်းသိ ရသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍလုပ်ငန်း ရှင်များအနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မည်ဆိုပါကစည်ပင်တွင်ညှိ နှိုင်းဆောင် ရွက်မှု လုပ်ဆောင်နေ ပြီး တည်ဆောက်ခွင့်တင်ရာတွင် လည်း အချို့မှာပြည်ထောင်စုအ ဆင့်ထိတင်ပြဆောင်ရွက်ရသည့် အခြေအနေများ ရှိနေကာ အထပ် မြင့် အဆောက်အအုံများ ဆောင် ရွက်မည်ဆိုပါကလည်း ညှိနှိုင်း ဆောင် ရွက်နေရသည့် အခြေအနေ များရှိနေပြီး ယင်းအခြေ အနေများ သည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရ မည့်အ ခြေအနေ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီး ချုပ်က ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာ ယာဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးနှင့်ဆောက် လုပ်ခွင့်ပါမစ်များ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တာချီလိတ် နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဧည့်သည်များ ၀င်/ထွက် လ?
လှည်းကူးမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းမည်ဆိုသည့်သတင်းမှာ မဟုတ်မမှန်ဟုဆို
လူးကပ်စ်နှင့် အဆန်စီယိုတို့၏ အရေးပါမှုကို ဇီဒန်း ချီးကျူး
မန္တလေးမြို့၌ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မီးတိုင်များ စိုက်ထူနိုင်ရန် အလှူရှင်များက ငွေကျပ်သိန်း ၂??
အချုပ်သား ထွက်ပြေးသွားသည့်အတွက် ရဲတပ်သားလေးဦးအား ရဲစည်းကမ်းအရ အရေးယူမည်